Ihe Ka Dayamọnd Mma | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2014
Isiokwu Afọ 2014
Ọgbakọ Jehova Na-aga n’Ihu
E Ji JW.ORG Ezi “Mba Niile” Ozi Ọma
Obi Dị Ha Ụtọ Maka Ọ́bá Akwụkwọ Anyị NKE DỊ N’ỊNTANET
Katuun Anyị Na-atọ Ụmụaka Ezigbo Ụtọ
Ile Ihe Ndị Ga-eme Gị Obi Ụtọ
Eshia, Izrel na Mba Ndị Gbara Ya Gburugburu
Siera Lion na Gini
Ihe Ndị Ị Ga-eburu n’Uche Gbasara Siera Lion na Gini
1915-​1947 Mgbe A Malitere Ikwusa Ozi Ọma na Siera Lion Nakwa na Gini (Agba nke Mbụ)
1915-​1947 Mgbe A Malitere Ikwusa Ozi Ọma na Siera Lion Nakwa na Gini (Agba nke Abụọ)
1915-​1947 Mgbe A Malitere Ikwusa Ozi Ọma na Siera Lion Nakwa na Gini (Agba nke Atọ)
“Ị Gaghị Agaru Ya Otu Afọ Nwụfuo”
Ha Na-akpọ Ya “Bible” Brown
‘Ime Ka Ọtụtụ Mmadụ Bụrụ Ndị Ezi Omume’ n’Afọ 1945 Ruo n’Afọ 1990​—⁠Dan. 12:⁠3. (Agba nke Mbụ)
Ha Chọrọ Ile Ya
‘Ime Ka Ọtụtụ Mmadụ Bụrụ Ndị Ezi Omume’ n’Afọ 1945 Ruo n’Afọ 1990​—⁠Dan. 12:⁠3. (Agba nke Abụọ)
‘Ime Ka Ọtụtụ Mmadụ Bụrụ Ndị Ezi Omume’ n’Afọ 1945 Ruo n’Afọ 1990​—⁠Dan. 12:⁠3. (Agba nke Atọ)
‘Ime Ka Ọtụtụ Mmadụ Bụrụ Ndị Ezi Omume’ n’Afọ 1945 Ruo n’Afọ 1990​—⁠Dan. 12:⁠3. (Agba nke Anọ)
Baajị Mgbakọ Ha Bụ “Akwụkwọ Ikike” Ha Ji Gafere
Jehova Enyerela M Ezigbo Aka
‘Ihe Isi Ike Kpụ Ọkụ n’Ọnụ’ n’Afọ 1991 Ruo n’Afọ 2001​—⁠Aịza. 48:10 (Agba nke Mbụ)
‘Ihe Isi Ike Kpụ Ọkụ n’Ọnụ’ n’Afọ 1991 Ruo n’Afọ 2001​—⁠Aịza. 48:10 (Agba nke Abụọ)
Esi M na Nwata Bụrụ Onye Agha, Ma Ugbu A, Abụ M Ọsụ Ụzọ Oge Niile
Anyị Gbanahụrụ Ndị Agha Nnupụisi
Nwoke Ụlọ Nche
Ihe Ka Dayamọnd Mma
Otú Ihe Si Kwụrụ Malite n’Afọ 2002 Ruo n’Afọ 2013 (Agba nke Mbụ)
Otú Ihe Si Kwụrụ Malite n’Afọ 2002 Ruo n’Afọ 2013 (Agba nke Abụọ)
Ekpebisiri M Ike Ife Jehova
Obodo Siera Lion Tọwara M Ụtọ
Ihe Ndị Mere n’Afọ 1914
Akwụkwọ Mgbaafọ Ndịàmà Jehova nke Afọ 2014
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Arabic Armenian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirundi Korean Malagasy Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tsonga Turkish Ukrainian Xhosa Zulu
MGBE A MỤRỤ YA n’Afọ 1948
MGBE O MERE BAPTIZIM n’Afọ 1972
ONYE Ọ BỤ Ọ rụrụ ọrụ n’ebe a na-egwute dayamọnd tupu ya abụrụ Onyeàmà Jehova. O sozi na Kọmitii Alaka dị na Siera Lion.
ARỤRỤ m ọrụ n’ụlọ ọrụ ndị Briten na-egwute dayamọnd n’obodo Tongo Filds n’afọ 1970. Obodo a dị n’ebe ugwu Kenema. Ha nwejuru dayamọnd enweju. M na-agakwa achọ dayamọnd n’onwe m mgbe ụfọdụ. Ọ na-abụ m chọta dayamọnd, mụ agaa ree ya na Kenema ma nọrọ ebe ahụ kporie ndụ tupu mụ alọta.
N’afọ 1972, mụ na Ndịàmà Jehova hụrụ, anyị malitekwara ịmụ Baịbụl. Mgbe ọnwa ise gachara, ndị okenye hụrụ na m ruru eru ka e mee m baptizim. Ma, e nwere otu nsogbu m nwere. Nsogbu ahụ bụ na enweghị m oge ezumike m ga-eji gaa mgbakọ a ga-anọ mee m baptizim. N’ihi ya, agwara m onye mụ na ya na-arụkọ ọrụ ka ọ rụchitere m ọrụ. Ọ gwara m na ya ga-arụchitere m ọrụ ahụ ma ọ bụrụhaala na m ga-ekwe enye ya ego a na-akwụ m n’izu. Agwara m ya na nsogbu adịghị, n’ihi na baptizim ahụ a na-aga ime m karịrị ego. Ma, mgbe m lọtara mgbakọ ahụ, ọ gwara m enyekwala ya ego n’ihi na ife Chineke ka ihe niile mkpa. Mgbe ọnwa isii gachara, m hapụrụ ezigbo ọrụ ahụ m na-arụ ma ghọọ onye ọsụ ụzọ pụrụ iche, si otú ahụ na-akpakọbara onwe m akụ̀ n’eluigwe.—Mat. 6:19, 20.
Emechakwara m bụrụ onye nlekọta sekit. Arụrụ m ọrụ ọsụ ụzọ pụrụ iche na ọrụ sekit ruo afọ iri na asatọ. Ọrụ abụọ a kpọgara m ọtụtụ ebe na Siera Lion. Ka oge na-aga, alụrụ m nwaanyị. Aha ya bụ Christiana. Ọ hụrụ Jehova n’anya, ọ na-akwadokwa m nke ọma. Jehova mechara jiri otu nwa nwaanyị gọzie mụ na nwunye m. Anyị gụrụ ya Lynette.
E nwere mgbe m na-achọgharị dayamọnd, ma emechara m chọta ihe ka dayamọnd mma. Ihe ka ya mma m chọtara bụ eziokwu gbasara Jehova na ihe ọma ndị ọ na-emere anyị n’ihi ozi anyị na-ejere ya
N’oge ahụ a na-alụ agha na Siera Lion, mụ na nwunye m na-asụ ụzọ n’obodo Bo. Obodo a bụ ebe ọzọ dayamọnd juru eju na Siera Lion. Anyị nyeere ọtụtụ ndị nọ na Bo aka ha abụrụ ezigbo ndị na-eso ụzọ Jizọs. Mgbe ihe dị ka afọ anọ gachara, ọtụtụ ndị batara n’ọgbakọ anyị. Dị ka ihe atụ, e kee mmadụ ole nọ n’ọgbakọ anyị ụzọ iri, ihe karịrị ụzọ isii batakwuru n’ọgbakọ. E nwere ọgbakọ atọ ugbu a na-eme nke ọma n’obodo Bo.
N’afọ 2002, a họpụtara m ka m soro na Kọmitii Alaka dị na Siera Lion. Mụ na nwunye m Christiana bi nso na Betel. Ana m esi ebe ahụ anyị bi abịa ọrụ na Betel kwa ụbọchị. Ma, nwunye m bụ onye ọsụ ụzọ pụrụ iche. Nwa anyị nwaanyị na-eje ozi na Betel. O sokwa ná ndị na-asụgharị asụsụ Krio.
E nwere mgbe m na-achọgharị dayamọnd, ma emechara m chọta ihe ka dayamọnd mma. Ihe ka ya mma m chọtara bụ eziokwu gbasara Jehova na ihe ọma ndị ọ na-emere anyị n’ihi ozi anyị na-ejere ya. Enyekwarala m mmadụ iri na asatọ aka ha aghọọ ezigbo ndị na-eso ụzọ Jizọs. O doro anya na Jehova agọziela m mmaji kwuru mmaji.